सत्यापन कोड बिना इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्नुहोस् ers ers अनुयायीहरू ▷ ➡️
जनवरी 28, 20190टिप्पणी 10753
प्रमाणिकरण कोड तपाईको लागि टाउको दुख्न सक्छ। देखि, यो जिज्ञासु छ कि यो एक समस्या हो बिभिन्न अनुप्रयोगहरूमा व्यापक। र त्यो प्रसिद्ध सामाजिक नेटवर्क हो इन्स्टाग्राम, सँग यस प्रकारको समस्या छ जुन धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रभाव पारेको छ, जसले केहि पनि गर्न सक्षमको बिना उनीहरूको खाता ब्लक गरिएको छ भनेर देख्छन्। तर राम्रो छ त्यहाँ दुई धेरै साधारण तरिकाहरू छन् तपाईंको अवस्था समाधान गर्न। पहिलो प्रविष्टि गर्नु हो इन्स्टाग्राम प्रमाणिकरण कोड बिना र दोस्रो कोडको आगमनलाई बाध्य पार्नु हो। दुबै केसमा परिणाम उस्तै छ। तर यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईलाई यो पनि थाहा छ प्रमाणिकरण कोडहरू सबै खराब छैनन्।
प्रमाणिकरण कोड के हो?
प्रमाणिकरण कोडहरू हुन् सुरक्षा रणनीतिहरु ईमेल र सोशल मिडिया प्लेटफर्म प्रयोग गर्दछ एसएमएस लागि तपाईको खातामा तपाईको फोन नम्बर लि link्क गर्नुहोस्। यस तरिकाले, यदि कोहीले तपाइँको खाताहरू पहुँच गर्न चाहान्छ, तपाइँको पासवर्ड हुनुको साथसाथै (यदि तपाइँले यसलाई प्राप्त गर्नुभयो) तपाइँसँग तपाइँको फोन हातमा हुनुपर्दछ, अन्यथा तपाइँ ती पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुने छैन। तर कहिलेकाँही यी प्रमाणिकरण कोडहरू, तिनीहरू तपाईंको इन्स्टाग्राम वा कुनै अन्य सामाजिक नेटवर्क हुन बाधा बन्न सक्छन्।
इन्स्याग्राममा किन प्रमाणिकरण कोडहरू छन्?
यो हुन को कारण एक आफ्नै कारणले हुन सक्छ सुरक्षा तंत्र को प्लेटफर्म को इन्स्टाग्राम। त्यो कहिले काँही तपाइँको ईमेलaको साथ संबद्ध गर्दछ अवस्थित खाता वा तपाईंले थप्नुभएको जानकारी पुन: निर्देशित गर्दै छ। साथ साथै, समस्या आफैले उत्पन्न गर्न सक्दछ, परिचय गर्दै गलत तरिकाले तपाईंको फोन नम्बर। त्यसो भए, तपाई प्रमाणिकरण कोड बिना इन्स्टाग्राममा प्रवेश गर्ने तरीका खोज्दै हुनुहुन्छ। दुबै केसका लागि समाधान उस्तै हो।
यो उपयुक्त छ कि तपाईंलाई थाहा छ, कि इन्स्टाग्रामले ईमेलबाट प्रमाणीकरण अधिकार दिन्छ जब यो गतिविधि संदिग्ध छ र अन्य समय पठाउनुहोस् प्रमाणिकरण कोडहरू हुन सक्छ उनीहरू आउँदैनन्। यो समस्या समाधान गर्न यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्।
प्रमाणित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्रविष्ट गर्नुभएको नम्बर सहि छ, यदि हो भने, निश्चित गर्नुहोस् कि यो सक्रिय छ त्यसैले तपाईं प्रमाणिकरण कोड प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यसले काम गर्दैन भने, अर्को नम्बर प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंसँग उपलब्ध छ यसका लागि तपाईंले आफ्नो नम्बरमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ इन्स्टाग्राम खाता. तपाईको खाताबाट खोल्नको लागि सुझाव दिइन्छ यस प्रक्रियाको लागि फोन र पीसी।
स्पाम फोल्डर जाँच गर्नुहोस् एसएमएस, यो कोड त्यहाँ रहेको हुन सक्छ। यदि होईन भने प्रयोग गर्नुहोस् जगेडा कोडहरू कसले प्राप्त गर्यो कहिले म इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्दछु, जुन तपाईं तपाईंको कन्फिगरेसनमा फेला पार्नुहुनेछ। यदि यो तपाइँको लागि काम गर्दछ भने, तपाइँ सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्नुहोस् कुनै प्रमाणिकरण कोड छैन।
उपकरण बन्द गर्नुहोस् र तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ स्थान परिवर्तन गर्नुहोस्। समस्या यो हुन सक्छ कि यो संकेत पुनर्निर्देशित गर्दै.
यदि माथिका मध्ये कुनैले पनि काम गरेको छैन भने, प्रयास गर्नुहोस् इन्स्टाग्राम सूचित गर्दै मद्दत केन्द्रबाट, ताकि तिनीहरूले तपाईंलाई समाधान दिन सक्छन्।
तर यदि तपाईं यसलाई ठीक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंको आफ्नै माध्यमबाट त्यसो भए तलको विकल्प प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
प्रमाणिकरण कोड प्राप्त गर्न चरणहरू
यस अवस्थामा तपाईंले सन्देश प्राप्त गर्न वेब पृष्ठ प्रयोग गर्नुपर्नेछ SMS, कल गर्नुहोस् एसएमएस अनलाइन प्राप्त गर्नुहोस्. कुन, पुरा हो नि: शुल्क छ र दर्ता आवश्यक छैन। यदि प्रमाणिकरण कोड बिना इन्स्टाग्राम प्रविष्ट गर्ने समाधान छैन। यस प्रक्रियाले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, यी चरणहरू अनुसरण गर्दै.
पहिलो कुरा भनेको वेबमा प्रवेश गर्नु हो एसएमएस अनलाइन प्राप्त गर्नुहोस्। एक पटक भित्र, तपाईले एक सूची देख्नुहुनेछ बिभिन्न देशहरूबाट आएका संख्याहरू र अर्को, सन्देशहरू अन्तिम 24 घण्टामा प्राप्त भयो। अब थिच्नुहोस् अधिक सन्देशहरूको साथ मोबाइल फोन। नेटवर्कले सुझाव दिनेछ कि तपाईले कम सन्देशहरू नम्बर छनौट गर्नुभयो, तर यसले तीसँग काम गरेको छ कि अधिक छ। यदि यो तपाइँको लागि काम गर्दैन भने, अर्को फोन नम्बर प्रयास गर्नुहोस्, किनकि पृष्ठ अपडेट नभएसम्म यो पियक्कड हुन सक्छ।
तपाईंले छनौट गरेपछि, सन्देश रिसेप्शन पृष्ठमा जानुहोस्, शीर्षमा, तपाईं फोन नम्बर देख्नुहुनेछ। प्रतिलिपि गर्नुहोस् "+" चिन्ह सहितजब तपाईंले यो गर्नुभयो, विन्डोमा टाँस्नुहोस् जुन तपाईंलाई देखाउँदछ इन्स्टाग्राम र प्रेस गर्नुहोस् "पठाउनुहोस्".
जब फोन नम्बर पठाईएको छ, ईन्टग्राम अगाडि बढ्नेछ तपाईलाई प्रमाणिकरण कोड पठाउनुहोस्। तपाईंले त्यसपछि सन्देश स्वागत पृष्ठमा फिर्ता जानुपर्नेछ र यसलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ।
कोड प्रतिलिपि गर्नुहोस्
अपडेट गरिएको पृष्ठको साथ तपाईं तल तालिकामा देख्न सक्नुहुनेछ, अन्तिम सन्देशहरू प्राप्त भयो। अर्को कुरा तपाईले गर्नु भएको प्रमाणीकरण कोडको प्रतिलिपि गर्नु हो जुन इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई पठाएको हो, जुन तपाईले फेला पार्नुहुनेछ को स्तम्भ सन्देश. सन्देश पहिलो बीचमा हुनुपर्दछ। त्यस्तै, प्रमाणित गर्नुहोस् कि स्तम्भ संख्या नम्बरबाट 69988 हुनुहोस्।
प्रक्रिया समाप्त गर्न, अघिल्लो चरणमा प्रतिलिपि गरेको कोड टाँस्नुहोस्, पृष्ठमा जहाँ इन्स्टाग्रामले सोधेको छ। एकपटक सकियो, तपाईंसँग हुनु पर्छ तपाईंको प्रमाणित इन्स्टाग्राम खाता र तपाईं कुनै समस्या बिना यसलाई पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ इन्स्टाग्राम को लागी सबै भन्दा राम्रो गीत.
1 प्रमाणिकरण कोड के हो?
2 इन्स्याग्राममा किन प्रमाणिकरण कोडहरू छन्?
3 सत्यापन कोड बिना इन्स्टाग्राममा लगईन गर्नुहोस्
4 प्रमाणिकरण कोड प्राप्त गर्न चरणहरू
4.1 प्रविष्ट गर्नुहोस्
4.3 अद्यावधिक गर्नुहोस्
4.4 कोड प्रतिलिपि गर्नुहोस्
4.5 कोड टाँस्नुहोस्
इन्स्टाग्राम कथाहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राममा स्थान अनुकूलन गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राममा कसले मेरो फोटोहरू बचत गर्दछ?